Mgbakọ Barcelona na-akọwapụta ọdịnihu njem nlegharị anya na-adigide
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » Mgbakọ Barcelona na-akọwapụta ọdịnihu njem nlegharị anya na-adigide
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Sustainability News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Mgbakọ Barcelona na-akọwapụta ọdịnihu njem nlegharị anya na-adigide.
Mgbakọ ahụ ga-ejedebe na 'Oku Barcelona ka ime ihe', nkwupụta ebumnuche nke gọọmentị, ebe ebe na azụmaahịa bịanyere aka na ya na-akọwapụta otu ọhụụ maka ndụ ndụ ndụ, ihe na-enye aka na njem nlegharị anya, na-ekwu maka ntinye aka nke ngalaba ahụ na ebumnuche mmepe Sustainable na gbanwee gaa na net-efu.
Nzukọ ahụ dabere na ntinye aka nke ndị isi sitere na azụmahịa, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mpaghara mba ụwa.
Nzukọ ahụ na-eme ka o doo anya mkpa ọ dị imekọ ihe ọnụ n'ịwulite njem nlegharị anya na-egbo mkpa.
Mgbakọ ahụ na-anọchite anya oge izizi ngalaba a na-achịkọta ọnụ kemgbe mmalite ọrịa a.
UNWTO sonyeere Advanced Leadership Foundation na Incyde Foundation nke Chambers of Commerce of Spain maka mmeghe nke ọdịnihu nke njem nlegharị anya ụwa Summit (26-27 October 2021). Mgbakọ ahụ na-anọchite anya oge izizi ngalaba a na-achịkọta ọnụ kemgbe mmalite ọrịa a.
N'ịkọwapụta mkpa njem nlegharị anya na-enwetụbeghị ụdị ya, Mgbakọ ahụ na-adabere na ntinye aka nke ndị isi sitere na azụmahịa, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mba ụwa, ya na Eze Ukwu Felipe VI nke Spain na-eje ozi dị ka Onye isi oche nsọpụrụ. N'isonyere UNWTO Secretary General Zurab Pololikashvili bụ Rebecca Grynspan, odeakwụkwọ ukwu nke United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Mauricio Claver-Carone, Onye isi oche nke Inter-American Development Bank (IADB), Juan Carlos Salazar, odeakwụkwọ- General nke International Civil Aviation Organisation (ICAO), Reyes Maroto, Minister of Industry, Commerce and Tourism of Spain, Juan Verde, President of the Advanced Leadership Foundation, na José Luis Bonet, Onye isi oche nke Chambers of Commerce of Spain. N'akụkụ ha bụ ndị minista njem nlegharị anya iri na-abịa n'onwe ha, yana ọtụtụ ndị minista na-esonye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ.
Mmekọrịta, ego na ihe ọhụrụ
Mgbakọ a na-eme ka o doo anya mkpa ọ dị imekọ ihe ọnụ, yana ọrụ dị mkpa nke inye ego njem nlegharị anya na iji ike nke ihe ọhụrụ ga-arụ n'ịwulite njem nlegharị anya na-adịgide adịgide na nke na-adịgide adịgide.
Secretary General UNWTO Zurab Pololikashvili kwuru, sị: "Nzukọ a na-eme ka o doo anya mkpa ọ dị imekọ ihe ọnụ, yana ọrụ dị mkpa nke inye ego njem nlegharị anya na iji ike nke ime ihe ọhụrụ ga-arụ n'ịwulite njem nlegharị anya na-adịgide adịgide na nke na-adịgide adịgide."
N'abụ Onye odeakwụkwọ ukwu Pololikashvili maka arụmụka dị elu maka 'Ịkwado ọdịnihu nke njem nlegharị anya', odeakwụkwọ ukwu UNCTAD Rebecca Grynspan kwusiri ike na "njem njem chọrọ nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị na itinye ego." Ms Grynspan kwadoro UNWTO maka ọrụ ya n'ịkwalite nzere ntozu na asambodo kemgbe mmalite nke nsogbu ahụ wee gbakwunye: "Njem njem nwere ike ịbụ ezigbo ume na ikike iji wuliteghachi nke ọma, n'ụzọ dị iche na ọnụ."
Na mmemme nke gosipụtara isi ihe dị mkpa nke UNWTO na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ n'ozuzu, ihe a na-elekwasị anya n'ụbọchị mbụ bụ ego maka ọdịnihu nke njem nlegharị anya, karịsịa na-eme ka mgbanwe ahụ gaa n'ihu na uto net-efu. Ebe ndị isi ụwa ga-abịarute Glasgow maka Mgbakọ Mgbanwe ihu igwe nke United Nations (COP26) n'izu na-abịa, mkparịta ụka na Barcelona mere mkpebi siri ike njem nlegharị anya ịnakwere ihe ọhụrụ ma nweta ego dị mkpa iji mee ka ngalaba ahụ nwee ike iru ọrụ ọrụ ihu igwe ya.
Barcelona 'Oku ime ihe'